हामी कसरी ठूलो परिवर्तन ल्याउन जाँदैछौं यदि 99% inanimate छ? मार्टिन भिजल्याण्ड
अब हामी निष्कर्षमा पुग्यौं कि हामी वरिपरि धेरै शाब्दिक साँघुरो हो (हेर्नुहोस यो लेख), म तपाइँलाई त्यस टिप्पणीको बारे फेरि सोच्न सोध्नेछु। म मतलब छैन 'एक तरिका को बोलने मा' या 'अक्षरों मा', म मतलब नहीं सचमुच पागलपन। "जानुहोस् र बढ्नुहोस्बाइबल बाट एक प्रसिद्ध बयान हो। केही होइन, किनकि पृथ्वीको यो ग्रह अचेल जैव-अवतारहरू भरिएको थियो र चर्चले यसका लागि ठूलो योगदान दिएको छ। र जब बच्चा जन्मेको वा प्रेरित हुन्छ, त्यहाँ बप्तिस्मा छ जसमा आमाबुबाले हेडमा पानी बप्तिस्मा मार्फत चर्चमा अवतार नियन्त्रण (तल भिडियो हेर्नुहोस्)। यो लिपि गार्डरहरूको एक राम्रो पहिलो चेक हो कि न्युज्याण्डको बच्चा अवतार एनिमेटेड छ भनेर हेर्न सकिन्छ।
आज, क्याथोलिक चर्च अझै संसारमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति ब्लक छ; त्यसोभए अस्तित्ववादी रक्तचन्दको साथ जसलाई स्क्रिप्टको रक्षा गर्न सकिन्छ: यसको मनमा नियन्त्रण धर्महरू र चर्चको माध्यमबाट राजनीति र व्यवसायमा कार्यकारी निकायको रूपमा लोकतान्त्रिक, बैंक र बहु-राष्ट्रको उपस्थिति छ, जसमा यसको रगतले अग्लो शासन गर्छ। ठूलो लिपि सधैँ विरोधाभास र ध्रुवीकरणको विरूद्ध घुमाउनुहुन्छ वर्तमान चलिरहेको (जस्तै प्लसमा र खनिज पोलहरू जस्तै सिधै हालको उत्पादन)। अधिक अवांछित मानव अवतार (कार्यक्रममा सजिलो छ) जसले आफैलाई यस शक्तिको ब्लकको सेवामा राख्छ, 'आत्मा' को त्यो सानो प्रतिशतमा राख राख्न सजिलो छ।
In यो लेख मैले वर्णन गरे कि मानव मस्तिष्क क्रैडबाट कसरी प्रोग्राम गरिएको छ। कृपया यहाँ जारी राख्नु अघि कृपया सजिलैसँग लेख दुवै पढ्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले यस संसारलाई यो बुझ्नुहुन्छ र यो ब्रह्माण्ड यो के छ: एक सिमुलेशन.
यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि (जैव-अवतारहरू) स्वयं-पुनरुत्थान गर्ने (पुनः प्रजननमा) एक प्रकारको कृत्रिम बुद्धि हो कि हामी हालैमा वर्तमान समयमा समावेश हुनेछ। मानवीय शरीर (मानव अवतार) को जैव-मस्तिष्क सिक्न, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमहरू पछ्याउनुहोस्, क्यारियर बनाउनुहोस्, संगीतको आनन्द, नृत्य, चलचित्रहरू हेर्नुहोस्, छुट्टीमा जानुहोस् र आनन्द लिनुहोस्। तथापि, यो मानव बुद्धि एआई (कृत्रिम रूप देखि बुद्धिमान) स्तर हो। उही तह अहिले टेक्नोलोजीको संसारमा पुग्न सुरु हुने छ, त्यसैले हामी यसलाई राम्रो बुझ्न सक्छौं।
कल एक संदेश वेबसाइट मा आयो Zerohedge.com जसमा यो रिपोर्ट गरिएको थियो कि फेसबुकले एआई विकसित गरेको छ जुन सुपर मेगा कम्प्यूटरको सट्टा सुपर मेगा कम्प्यूटरको सट्टा सरल कम्प्युटरमा काम गर्न सक्छ जुन कुनै पनि समयमा सबै भन्दा जटिल खेल जान सिक्न र संसारको सबैभन्दा राम्रो खेलाडीलाई हराउन सफल भयो। फेसबुकले एआई प्रणाली (प्लुरिबस भनिन्छ) लाई विकसित गर्यो जसले6ठूलो पोकर खेलाडीहरू समय र समयलाई हराउन सफल भयो। यसैले यो एअरले जटिल विजय परिणामहरूको माध्यमबाट धेरै खेलाडीहरूलाई धकेल्छ। गो जस्तै खेल ए ए को लागि अपेक्षाकृत सजिलो छ, यस तथ्यको बावजूद कि सम्भावित ब्रह्मा मा परमाणुहरू भन्दा धेरै बोर्ड संयोजनहरू छन् (किनभने सबै जानकारी कम्तीमा हेर्न उपलब्ध छ)। यसले AI को प्रशिक्षित गर्न सजिलो बनाउँछ। यो पोकरको लागि फरक छ, किनकी तपाईं धेरै खेलाडीहरूको ब्लफ कारकसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण फेसबुकले निम्न कथनलाई निम्न कथन सुरु गर्न मन लाग्यो:
हामी 2019 हौं र प्रविधिमा विकासहरू चाँडै जाँदैछौं। हामी AI-driven world तिर हिडिरहेका छौं, तर उनीहरूलाई थाहा छैन कि एक प्रतिलिपि भित्र प्रतिलिपि बनाउँदै। हामी पहिले देखि नै एए संचालित भर्चुअल वास्तविकता मा रह रहे हो र यस सिमुलेशन को बिल्डर हामिलाई transhumanism को माध्यम ले अनन्त जीवन को वादा को पेशकश गरेर 'अनन्त जीवन' मा तोडने को कोशिश गरेर रहेको छ र यसैले हामी एआई को (झूठी) लचर गर्न। त्यो त्यहि अनन्त जीवन हो जुन हामीले धर्मको माध्यमबाट प्रस्ताव गरेको छौँ र 'मैसेजिया' निश्चित रूपमा 'बादल' बाट आउनेछ। "Messiah" जो हामीलाई हामीलाई झूटो बनाउन को लागि (झूटा) सिंगलुरिटीमा आउनुहुनेछ जसले एआईमा पनि हराएको छ र यसैले मूल खेलाडीको रचनात्मक शक्ति (जससँग तपाईसँग अझै पनि वायरलेस आत्मा जडान छ) प्रयोग गर्दछ। क्वांटम फील्ड (एक भाइरस जस्तै)।
यद्यपि, AI को क्षेत्र मा यी घटनाहरु को लागी धन्यवाद, यो तेजी देखि बेहतर छ कि मानव अवतार एक जैव-मस्तिष्क संग एक स्वायत्त जैव-अवतार हो कि कृत्रिम रूप देखि समझदारी देखि संचालित छ। विज्ञान पहिले नै स्टेम सेल जानकारीबाट अङ्ग्रेसनहरू प्रिन्ट गर्न सक्षम छ र तथाकथित बढ्दै जान्छ जसमा मस्तिष्कको 3D मोडेलहरू बनाइएका छन्। मस्तिष्क स्क्यान पनि तेजी देखि पतले मसाड गर्दैछन् र मान्छे मानव मस्तिष्कको कार्यलाई बुझ्न थालेका छन्। यो बलियो लाग््छ कि हाम्रो मस्तिष्क कृत्रिम बुद्धिमान जैव प्रोसेसर जस्तै व्यवहार गर्दछ। केही समयपछि हामी मस्तिष्कलाई पनि छाप्न सक्दछौं र निश्चित गर्नुहोस् कि इच्छित AI प्रोग्राम चलाउन सही आकार हो। त्यसपछि हामी बायो-रोबोट अवतारहरू छाप्न सक्छौं। बेशक यी टेक्नोलोजी घटनाक्रमहरु सबै अल्जाइमरको समस्या र डेमेन्टिया को हल गर्न को लागी या उमेर को प्रक्रिया को रोकन को बारे मा कम हुन्छ, तर तपाईं मान सकते हो कि 'उच्च' लक्ष्य हो। क्लाउडमा मस्तिष्क फाँट गर्न वा अद्यावधिक र परिवर्तनहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने मस्तिष्क कसरी काम गर्दछ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। यो सम्पूर्ण मानव जीव प्रणालीमा लागू हुन्छ। मानव-जैव-रोबोट सम्भवतः 'अपग्रेड' र अमर प्रतिलिपिहरूको आधार आधार राख्न यसको आफ्नै प्रणाली चार्टिङ गर्दैछ।
मेरो प्रस्ताव यो हो कि मानव अवतार वास्तव मा पहिले देखि नै यस सिमुलेशन को भित्र स्वायत्त जैव-रोबोट (अवतार) को रूप मा बनािन्छ र केहि अवतार बाह्य नियंत्रण गरिन्छ, तर अधिकांश "अचूक अवतार" हो। यसको अर्थ उनीहरूले प्रजनन प्रक्रिया मार्फत हस्तान्तरण कार्यक्रम कोड (डीएनए) को आधारभूत सेट दिएका छन् र पाईड टर्न सिक्ने प्रक्रियाको माध्यमबाट बायो-मस्तिष्कमा आधारभूत ए प्रोग्राम को प्रशिक्षित गर्न सक्दछ।
यो सिमुलेशनमा भाग लिँदा तपाईंले आफ्नो अवतार रोज्नु हुन्छ; तपाईं दर्पणमा हेर्दा तपाईंको आँखा कस्तो लाग्छ?
एक पटक हामीले पत्ता लगाइयो कि यो सिमुलेशन ठूलो मात्रामा inanimate (तर कृत्रिम बुद्धिमानी आत्म-प्रतिकृयात्मक जैव-अवतार) भरिएको छ र गैर बजाउने वर्ण (NPCs) परिचय पेश गर्न सकिन्छ, हामी पनि यो बुझ्न सक्छौं कि हामीलाई यसलाई जनताबाट अपेक्षा गर्नु हुँदैन । 'प्रणाली' वा पावर ब्लकको विरोध गर्ने ठूला समूहहरूको अपेक्षा नगर्नुहोस्। यो बस हुनु हुँदैन, किनकि 99% inanimate छ। यही कारणले गर्दा तपाईं यस्तो अन्तर्वार्ता प्रेरित व्यक्तिमा यो संसारमा आउनुहुँदा मान्यताको यस्तो जांघ तपाईं मार्फत जान सक्छ। यो दुर्लभ बनिरहेको छ। यसैले तपाईं यस संसारमा अकेला महसुस र अकेला महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यसैले तपाई प्रायः सोचेको हुन सक्दछ कि तपाई वरपरका मानिसहरू रोबोट हुन्। यो सब बस्छ। के तपाइँ कहिलेकाहीं गलत बुझ्नु हुन्छ? त्यो पनि सही छ। एआई प्रणाली एक नै रचनात्मक 'एकलता तह' बाट आउँदैन जुन तपाइँ (तपाईंको अवतारको बटनमा एक) बाट आएको छ। यसैले यो तपाइँले कहिल्यै फ्याटम गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईं सृजनात्मक प्रकृति हुनुहुन्छ र यो सिमुलेशनमा भाग लिन चुनेको छ। एकल एकाइहरूको विकासशील शक्तिको परीक्षण गर्न यो भाइरस अनुकार हो। युनिभर्सल मौलिक रचनात्मक इकाई तपाईंले परीक्षण गरिरहनु भएको छ र यो मूल्यको लागि भाइरस प्रणालीलाई मान्यता दिनुपर्छ। तपाईं (जानबूझेर वा अनियमित रूपमा) यस लुसिफेरियन सिमुलेसनमा भाग लिनु भएको छ, तर तपाईंसँग अझै पनि निःशुल्क इच्छा र नियन्त्रण छ। अब अकेला महसुस गर्ने कुनै कारण छैन। त्यो यो अनुकरण भ्रमको भाग हो। तपाईंलाई धक्का दिइयो। तिमी मूर्ख हुनेछौ। तपाईं लाखौं, अरबौं soulless (अनियन्त्रित) तपाईँका वरिपरि एअभिटरहरू देख्नुहुन्छ। स्व-सिकाउने आत्म-प्रतिकृति जैव-रोबोट जुन स्मार्ट हुन सक्दछ, तर मूल तहबाट नियन्त्रित छैन। तिनीहरू 'आत्मा' वा 'प्रेरणा' को अवधारणा बुझ्न सक्नेछैनन्; धर्मबाट प्रोग्राम गरिएको टर्मिनोलोजीको तुलनामा। सबैभन्दा बढी तिनीहरूले सिमुलेशन भित्र सिमुलेसन निर्माण गरेर यसलाई अनुकरण गर्न सक्षम हुनेछन्। अब अकेला महसुस र निराश हुन रोक्न। त्यहाँ कुनै बटन छ कि सिंहावलोकन छ र तपाईं हो। दण्ड नगर्नुहोस्: कुनै परिस्थितिमा; यद्यपि तपाईं शारीरिक मृत्युको पछाडि आउनुभयो भने: तपाईले यो सिमुलेशन छोड्नु हुनेछ।
त्यसैले यदि तपाइँ शीर्षकबाट प्रश्न चाहानुहुन्छ: "यदि हामी 99% inanimate छ भने हामी ठूलो परिवर्तन कसरी गर्न सक्छौं?", म तपाईंलाई यी3लेखहरू सावधानीपूर्वक फेरि फेरि पढ्न र क्रोनलजील क्रममा पढ्न सिफारिस गर्दछु:
'अहं' ए ए प्रोग्राम हो जसले मानव-अवतार बायो-रोबोटको स्वत: पालट भरिएको छ
त्यहाँ एउटा कारण हो जुन तपाईं र म अझै पनि यहाँ निर्णय गर्न चाहन्छु। हामी भाइरस प्रणाली रोक्न वा यसको सिक्न प्रक्रियामा छौं। यद्यपि, अकेला, एक्लो, निराश, निराश वा निराशा महसुस गर्ने कुनै कारण छैन। तपाईंको दिमागले यो महसुस गर्छ, किनकि यो तपाईंको वरिपरि सबै गैर प्लेइङ क्यारेक्टरहरू (एनपीसी) हेर्छन्; एनपीसीहरू सबै चीज निस्कनुको कारणले गर्दा नचाहिने र कहिल्यै विरोध गर्दैन। त्यो सिमुलेशन हो जुन तपाईंलाई भ्रमित गर्दछ। तपाईंको मौलिक रचनात्मक सिंगलियरिटी फारमको रचनात्मक (र सजावटी) शक्तिलाई विश्वास गर्नुहोस् (सूचीबाट पहिलो लेख हेर्नुहोस्)।
स्रोत लिङ्क सूची: zerohedge.com, theguardian.com
ट्याग: ai, अवतार, प्रेरणा, जैव अवतार, मस्तिष्क, फेसबुक, विशेष, खुफिया, कृत्रिम, पुरुषहरुको, बिग्रिएको, inanimate, organoids, Pluribus, क्लाउड, आत्मा
15 जुलाई 2019 मा 06: 33
तपाईले लेख्नु भएको छ कि मेरो लागि चिन्ताजनक छ, म लगभग रुन्छु, मेरो सम्पूर्ण जीवन मैले प्रायः गलत समझेको छ, अरूको विपरीत, प्रायः अकेला पनि, आंशिक कारणले मलाई बुझ्न सकिएन कि जानबूझेर धेरै व्यक्तिहरू छन्। हानिकारक, जो अपमानजनक र निस्सन्देही निगल र सबै केहि गर्छ, जबकि मैले अझै सकेन र यो गर्न सक्दैन।
म के भन्नुहुन्छ, म के भन्छु, महसुस गर्छु, धेरै मानिसहरू द्वारा (ससूली) को सराहना गर्दैन, किनकी यो अनुमति छ र सम्भव छैन, वास्तवमा तिनीहरूले तपाईंलाई 'अर्डर गर्न' भन्छ, आशा छ कि तपाईं त्यसपछि फेरि नव-रेखामा, मलाई सन्तुलन गर्न समस्या थियो।
मेरो आमाले एक पटक भन्नु भएको थियो: तपाईले कत्तिको जिब्रो हुनुहुन्छ, जिद्दी, विद्रोह, पछि भन्नु: यदि म अतीतमा प्रायः धेरै पटक हुन्थ्यो।
मेरो पूर्व काममा कसैले कसैले एक पटक भन्नुभयो: तपाईं शुद्ध हुनुहुन्छ, पछि मात्र मैले यसको बारेमा सोच्न थालें, किनकी मैले पत्ता लगाए कि अधिकांश मान्छे होइनन्।
मेरो बाटोमा मैले विरोध गरेको छु, कहिलेकाहीँ अमानवीय कानुन र नियमहरू जुन मेरो जीवनमा भरिएको थियो, यसको विरुद्धमा अन्य चीजहरू बीचमा, म यो / दण्डित हुनेछु, तर म पनि मद्दत गर्न सक्दिनँ, म यो अफसोस छैन ।
मेरो संसार केवल केहि एनिमेटेड व्यक्ति संग सानो छ, अन्यथा म सोशल मिडियामा छैन, मैले मतदान गरेन र तिनीहरू मेरो अंगबाट टाढा रहन्छन्।
15 जुलाई 2019 मा 10: 26
त्यो सुन्न राम्रो छ। र अब तपाईलाई यो थाहा छ, यो समय हो "तपाईंको समय यहाँ खर्च नगर्नुहोस्" तर तपाईंको मूलको लागि उपयोगी तरिकामा तपाइँको जडानको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं यहाँ भाइरसको प्रणाली हटाउन र आफ्नो रचनात्मक शक्ति प्रयोग गर्न हुनुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो अवतार दिमाग (शायद / सम्भवतः) को वरिपरि ती सबै घनिष्ठ अवतारबाट निराशाको परिणामको रूपमा कमजोर पार्ने भावनालाई बहाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं भव्य हुनुहुन्छ र तपाईं सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
15 जुलाई 2019 मा 12: 57
तपाईं राम्रो र राम्रो राम्रो प्रतिक्रिया छ कि तपाईं यसलाई पोस्ट। म अरूबाट प्रतिक्रियाहरू हेर्न चाहन्छु जसले पनि आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवहरू साझा गर्न चाहानुहुन्छ।
15 जुलाई 2019 मा 08: 57
एकछिन पछि उनीहरु एक अर्काको साथमा बसेका थिए। उनीहरु एक अर्काको घरमा बस्दै आएका थिए। धेरै राम्रो!
एकैछिन प्रश्न ... त्यो पुजारीले के गर्दछ कि बच्चा एनिमेटेड हुन्छ हाँ होईन वा? कसैले कसरी प्रेरित हुन सक्छ वा छैन? अथवा त्यो विशेष चश्मेहरूसँग मात्र सम्भव छ जस्तै "चलचित्र" तिनीहरू? ।
तर तपाईं आफ्नो एन्टिमेटेड व्यक्तिलाई भेट्दा तपाईंको बयानमा राहत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, के तपाई ती प्रभावहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ जुन तपाईंले चश्मेको आवश्यकता छैन? म यो जान्न चाहन्छु कि तपाई यसलाई कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ?
अग्रिम धन्यवाद ..
15 जुलाई 2019 मा 10: 02
यदि पूजाहारीहरू अवतारहरू हुन् जुन बिल्डर (वा बिल्डर टोली) द्वारा नियन्त्रित छन् - ती अरभन्थिक नियन्त्रण पनि भनिन्छ - त्यसपछि तिनीहरू थिए, लूसीफरियन चश्मा यो सिमुलेशनमा।
15 जुलाई 2019 मा 10: 04
र कसैले कसरी प्रेरित गरेको छ भनेर थाहा छ? तिमीलाई थाहा छ। तपाईंले त्यो अर्थ विकास गर्नुभयो वा (बरु) तपाईसँग यो जन्म बाट छ।
15 जुलाई 2019 मा 11: 45
त्यो राम्रो छ। त्यसोभए जब तपाईं सडकमा हिँड्नु भयो भने तपाई आफैलाई भन्नुहुन्छ; "यो ब्रेक हो र यो छैन"?
दुर्भाग्यवश म यो गर्न सक्दिन ...
15 जुलाई 2019 मा 11: 58
केहि को लागि, यो प्राकृतिक रडार धेरै सानो छ वा प्रयोग छैन (कार्यक्रम छवि द्वारा दबाइयो)। फेरि शान्त रहनुहोस् र आफ्नो आत्मालाई तपाईंको मूलसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।
15 जुलाई 2019 मा 12: 12
तर तपाईंको प्रश्नको उत्तरमा:
हो, यो कसरी काम गर्दछ। ईमानदार हुन, यो बरु विपरीत छ। अब यो अचम्म लाग्ने एनिमेटेड व्यक्तिहरू हेर्नको लागि दुर्लभ हो जुन यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ जब कसैले प्रेरित हुन्छ।
15 जुलाई 2019 मा 13: 23
त्यसोभए उनीहरुका साथीहरुसँग भेटघाट गरेकी थिईन। उनीहरुका लागि उनीहरुसँग भेटघाट गरेकी छिन्। एक अर्काको पछाडी ..
म Amygdala बनाम PFC बनाउँछु लेखे:
16 जुलाई 2019 मा 12: 20
आजको 'संसार' प्रकार्यमा हराएको बाटो भित्र 80% भन्दा धेरै व्यक्तिहरू। तिनीहरू आफैले 'सान्त्वना क्षेत्र' मा जीवन बिताएर आफ्नो दिमागमा सुरक्षित मोड बनाए। उनीहरूले प्राकृतिक सम्बन्धबाट 'प्रकृति', ब्रह्मांड, उनीहरूको आफ्नै हृदयबाट विच्छेदन गरेका छन् ... यसले मूल प्रेरणाको साथ बाँधेको छैन ... धेरैजसो अवस्थामा यो होशियार बेहोश रूपमा पूर्वनिर्मित भएको छ ...
16 जुलाई 2019 मा 12: 37
प्रकृति र ब्रह्मांड अनुकारको भाग हो। यो हेर्न को लागी आवश्यक छ। त्यसैले तपाईं आफ्नो मूल आत्म जीर्ण गर्न चाहनुहुन्छ, तर यो हेर्न को लागी, यी लेखहरूको सार बुझ्न उपयोगी छ।
15 जुलाई 2019 मा 12: 06
अचम्मका व्यक्तिहरू प्रायः दिमाग नियन्त्रण कार्यक्रमहरू जस्तै धर्म र प्रोग्रामिंगका सबै प्रकारका प्राविधिक माध्यमहरू (टिभि, सोशल मिडिया, इत्यादि) मार्फत नियन्त्रणमा लिएका छन्। नजिकको भविष्यमा, मस्तिष्क-क्लाउड इन्टरफेसले जनतालाई अझ सजिलै नियन्त्रण गर्नेछ, प्रेरित व्यक्तिलाई पनि कम गर्दछ। जैव-मस्तिष्कमा ती सबै बाह्य प्रभावहरू सम्भव राख्न जरुरी छ।
15 जुलाई 2019 मा 17: 11
के तपाईं अनुमानित हुनुहुन्छ कि अचम्मलाग्दो व्यक्तिले सबैलाई उत्प्रेरित गर्न सक्दछन्, तिनीहरू सबैलाई सिद्धान्तमा प्रेरित भएका छन्? अथवा बरु, सबैलाई पृथ्वीमा जिउँदो हुन्छ?
15 जुलाई 2019 मा 18: 38
यदि तपाईले3लेखहरू र लेखमा राखिएका टिप्पणीहरू पढ्नुहुन्छ भने तपाईंले देख्नुहुनेछ कि मेरो विचारमा यो मामला होइन।
जन्मेका सबैजना प्रेरित छैन। तपाइँ खेलमा आफ्नो अवतार छनौट गर्नुहोस्: यसले प्रेरित जन्मेको छ। बाकी एअर (एगो भनिन्छ) मा मात्र चल्छ।
नोट: अवतार जो बाह्य रूपमा नियन्त्रण गरिएको छ (तपाईले "प्लेयर" को रूपमा वा नियन्त्रण समूह द्वारा) पनि एआई प्रणाली (अहं) छ। यसले कहिलेकाहीँ अवतारलाई यसको बाह्य नियन्त्रणलाई बेवास्ता गर्न सक्छ (जुन मुख्यतः पादरीमा कब्र बाट प्रोग्रामिंग को परिणाम)।
15 जुलाई 2019 मा 21: 02
त्यहाँ पछाडि एक मात्र तरिका हो र त्यो प्रकृतिमा छ। जब म एक दिन शहर जान्छु, त्यो सबै प्रतीकले मलाई पागल पार्छ। सबै ठाउँहरू शनि पूजा वा चौंका प्रतीकहरूसँग टी-शर्टहरूका साथ हिंडिरहेका छन्। तिनीहरू संगीत ब्यान्ड र प्रसिद्ध कलाकारहरूको कारणले गर्दा प्रशोधन गरिन्छन्। यो स्वचालित रूपमा एक संदिग्ध वा प्रश्न बिना, लिइएको छ। तपाईले सबै ठाउँमा सुन्न र हेर्नु हुन्छ, शहर प्रकृति भन्दा टाढा। हामी त्यहाँ शुद्ध शुद्ध हुनु पर्छ, मेरो आत्माले निश्चितको लागि जान्दछ।
16 जुलाई 2019 मा 13: 47
मैले भर्खर मार्टिनबाट सिके कि "प्रकृति र ब्रह्मांड अनुकारको भाग हो। यो हेर्न को लागी आवश्यक छ। त्यसैले तपाईं आफ्नो मूल आत्म जीर्ण गर्न चाहनुहुन्छ, तर यो हेर्न को लागी यी लेखहरूको सार बुझ्न उपयोगी छ। " मैले भर्खरै यो साइटमा सब्सक्राइब गरेँ। म 'जागरण' को भ्रम बाट भर्न जारी गर्नु अघि म यस मा विभिन्न लेखहरू पढ्न जाँदैछु।
16 जुलाई 2019 मा 20: 14
मैले पनि पढें। कहिलेकाहीं तपाईं सजिलै आफैलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईं तनाव र कम आवृत्तिहरू घनिष्ठ हुनुहुन्छ वा यदि तपाई शरीर आवृत्तियों 432hz मा टाउको हुनुहुन्छ भने।
निस्सन्देह स्वभाव यो सिमुलेशनको भाग हो, तर यो एउटा प्रतिलिपि हो जसको आवृत्ति घट्यो। तपाईले आफ्नो भित्रको सही सेटिङ फेला पार्न सक्नु भएको मूल तह भेट्टाउन सक्नुहुन्छ!
यो साँच्चिकै पहिलो म्याट्रिक्स फिल्ममा मनपर्दैन जुन हाम्रो मूल सकल खानाको लागि बाँच्नको लागि खान्छ। यो सिमुलेशन को बढावा दिन को लागी चाल छ।
17 जुलाई 2019 मा 12: 35
यो समाधान "खतरनाक रगत" (गूगल वा YouTube मा खोज) को बयान हुन सक्छ जुन खराब कामका साथ छुटकारा पाउन को लागी तपाईले पुनर्जन्म राख्नु भएको छ। रगत शक्तिशाली छ र राम्रो र खराब दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं 144000 (बाइबिल) मध्ये एक हुनुहोस् र यदि तपाईं "मर्नु" (भाइरस कम्प्यूटरमा फिर्ता नहोला) फिर्ता जान सक्नुहुनेछ सोच्नुहोस् यदि मार्टिनले यो अनुसन्धान गरेको छ र यसमा जान्न र यसको बारेमा लेख्न सक्छ।
17 जुलाई 2019 मा 16: 18
यदि यो ब्रह्मांड सिमुलेटर फरक सिमुलेशन भित्र घुमाउँछ भने, "उच्च सिमुलेसन" (जसमा यो एक रन हुन्छ) तपाईँले खेलाडीको विकल्पसँग गुप्तिकरण गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने उनीहरूले अनुकारको भाग पनि गर्दैनन् (चलो भन्छिन्) यसलाई "प्रतीक्षा कोठा सिमुलेसन" भनिन्छ)।
छोटोमा: तपाईं पुन: पुनर्जन्म छैन। तपाईं केवल सम्झना राख्नु पर्छ कि तपाईं सिमुलेशन मार्फत धक्का भइरहनुभएको छ र तपाइँ सधैँ आफ्नो मूल इकाई फारममा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ (जुन चेतनाको पहिलो रूप "स्टेम सेल" बाट उत्पन्न हुन्छ) जुन रचनात्मक प्रकार्य छ।
तर त्यसोभए हामी उनीहरूको पुनरुत्थान कथाहरू सत्य हुन्। के हामीले कहिल्यै ठोस प्रमाण देखेका छौं?
17 जुलाई 2019 मा 18: 37
सोध्नको लागि कठिन प्रमाण धेरै धेरै हुन सक्छ। मलाई थाहा छ कि एक प्रोफेसर, मनोचिकित्सक, इयान स्टेभेनसनले पुनरुत्थानमा व्यापक तथा गहिरो अनुसन्धान गरेको छ, विशेष गरी बच्चाहरु जसले विवरणको साथ अघिल्लो जीवन सम्झन सक्छ। दिलचस्प सामग्री, जन्म चिन्हहरू र जन्मको दोषहरूले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
17 जुलाई 2019 मा 20: 38
एक सीरिया केटाको कथा सम्झनुहोस् जसले उनको हत्यारा (अघिल्लो जीवनमा) पहिचान गर्यो र कोर्सेको स्थान पत्ता लगाउन सक्षम भयो।
17 जुलाई 2019 मा 20: 39
तपाईं सिमुलेशन मोडेल मार्फत देख्नुहुने सबै व्याख्या गर्न सकिन्छ।
18 जुलाई 2019 मा 18: 49
@Martin, के तपाईं त्यस बयान अगाडी बढाउन सक्नुहुन्छ?
प्रमाणको सन्दर्भमा @Zonnetje र @ZandinOgen उपस्थित, साथसाथै शोधकर्ताहरुको प्रमाण को मान्छे जसको 'लगभग मृत' अनुभव भएको छ जसले रिपोर्ट गर्न सक्दछ (जसमा एन्टिभेसिया अन्तर्गत) हुन सक्छ कि सर्जनहरूले भनेका छन् आपरेशन कक्ष र उस्तै सर्जनले पुष्टि गर्छ कि पछि (उनीहरूले साँच्चै भन्नुभयो), के अनुकरण सिद्धान्तसँग के गर्नु पर्छ?
18 जुलाई 2019 मा 19: 04
ठीक छ, फेरि 'इराक मा धितो' (बकवास) फेरि आफ्नो पछिल्लो प्रतिक्रिया पढ्न पछि, तपाईं आफ्नो मतलब पछि तपाईं 'प्रतीक्षा कोठा सिमुलेशन' मा समाप्त हुन्छ र यदि तपाईं त्यहाँ गलत निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईं फेरि पुनर्जन्म छ।
यो तथ्यलाई बदल्न सक्दैन कि त्यहाँ धेरै कडा प्रमाणहरू छन् जुन शुद्ध कार्नाइट वास्तवमा हुन्छ, होइन?
18 जुलाई 2019 मा 20: 22
कथाहरू कहिल्यै सख्त प्रमाण छैनन्। तिनीहरू कथाहरू हुन्।
18 जुलाई 2019 मा 21: 02
त्यसपछि अदालतमा साक्षी बयानहरू पनि कथाहरू हुन्।
18 जुलाई 2019 मा 21: 09
सम्भवतः यो के हो? निस्सन्देह भने त्यहाँ थुप्रै साक्षीहरू छन् जसले यस्तो घोषणा गर्छ। त्यसपछि न्यायाधीशले साँच्चै संदेहको फाइदा दिन्छ ..; )
18 जुलाई 2019 मा 21: 42
यस सन्दर्भमा, म आफैं न्यायाधीश हुँ।
20 जुलाई 2019 मा 02: 04
100% निश्चित रूपमा पुन: पुन: पुनर्गठन हो। जब तपाईं (डिसिङ) एक पाडलमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईंको आत्मा त्यस शरीरमा अवतारित हुन्छ। समस्या यो छ कि हामी अब हाम्रो इतिहास सम्झन सक्दैनौं। म समय मा विश्वास गर्दैन र विश्वास छ कि आत्मा को इतिहास मा लग गर्न को लागी संभव छ। म आत्मा विकासमा विश्वास गर्दछु, त्यस क्षणमा तपाईले यो थाहा पाउनुहुनेछ कि तपाइँसँग अब तल्लो स्तरमा हेर्नको लागि केहि छैन। त्यो क्षण अब आइपुग्यो, तपाईं अहिले धेरै जानकारी जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ अब भाग्नको लागि। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन धोका दिएका छन् कि पृथ्वीमा स्तर धेरै कम छ। कल्पना गर्नुहोस् कि यदि तपाई अहिले जगेडा गर्नुहुन्छ र तपाईंले यस स्तरमा हेरेका सबै पाठहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईं फेरि यसको लागि पतन गर्न चाहनुहुन्न। मार्टिनले यो स्पष्ट बनाउन चाहन्छ, सबै टेक्निकल सम्भावनाहरूले प्रलोभन नगर्नुहोस्, किनकि हामीले पहिले नै यो स्वीकार गरेका छौं। हाम्रो शुद्ध जानकारी आत्मा को स्रोत ह्याक गरिएको छ ताकि हामी त्यहि गल्तीहरु लाई दोश्रो बनायौं।
यसैले यस स्तर मा पुनर्जन्म एक समाधान होइन र हामी समाधान गर्नु पर्छ कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या हो।
20 जुलाई 2019 मा 08: 30
राम्ररी बोल्दै। ठीक छ: थाहा छ कि तपाईं फिर्ता आउन छैन।
तपाईं धेरै अचम्मका मानिसहरू बीचमा बस्नुहुन्छ जुन तपाईं प्रणालीमा आत्मसमर्पण गर्न उत्प्रेरित हुनुहुन्छ र यदि तपाईं "भक्ति" कमजोर हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई कमजोर लाग्छ।
यस आविष्कारमा आउनुहोस् कि तपाइँ अनुकरणमा बस्नुहुन्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्! महत्त्वपूर्ण: सबै अस्तित्वको उत्पत्तिलाई संक्रमित गर्न लसिफेरिया भाइरस सिमुलेसनको उद्देश्य। यदि तपाइँ पत्ता लगाउनुहुन्छ कि तपाईंको चेतना (जो कि सबै चीजको स्टेम सेलबाट आउँदछ) एक व्यक्ति रचनात्मक इकाई हो, त्यस पछि तपाईले यो भाइरस प्रणाली निर्माण गर्ने र भाइरस प्रणाली निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिम (यो मानव बायो-अवतार) स्तरमा यो सम्भव छैन, तर तपाईं चेतनाको स्तरमा यो गर्नेछौं। यस सिमुलेशनको साथ आफैलाई धेरै चिन्न नदिनुहोस्। यो केवल एक "सपना संसार" हो। तपाईं साँच्चै यहाँ हुनुहुन्न, तपाइँ सिमुलेशनमा हेर्नुहोस् (र सँगै प्ले गर्नुहोस्)।
20 जुलाई 2019 मा 10: 26
@ guppy तपाईंको शब्दहरु यस सिमुलेशन हकीकत को मेरो दृष्टि संग गुजारा। प्रारम्भिक उमेरबाट मैले सधैँ एक अवलोकन रवैया लिएको छु, अज्ञात रूपमा मैले जान्थे कि केहि सिमुलेशनको दृश्य हेर्ने कुरामा हामी असहमति थियो जुन हामी कैदीमा बस्दैछौं। म कुकुरमुखी सोचमा टाँस्न सक्दिनँ, मैले सँधै सोचेको छु किन किन, र सत्य खोज्नको लागि खुला रवैया एक विशेषताको विशेषता हो जुन तपाईले हुनु पर्दछ। विशेष गरी बालबालिकालाई समानुपातिक सोच्न प्रोत्साहित गरिनु पर्छ र किन प्रश्न सोध्नु हुन्छ, जिज्ञासालाई प्रोत्साहन दिनुहोस्, खोजी सुरु गर्नुहोस्। हामी यहाँ आध्यात्मिक रूपमा बढ्दै छौं हामी विश्वव्यापी स्रोतमा फर्काउँछौं। यस वास्तविकताको ढोका जागिरको बारेमा सजग छन् र अब ढोकामा प्राविधिक लक स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ।
« कैन एनन, एपिस्टीनका पत्रहरू, क्लिंटन सम्बन्ध, 'सत्य समुदाय': यो अझै पनि ठीक हुनेछ!
MH17 हवाई आपदा: हामी अरू के विश्वास गर्न सक्छौं? »
कुल भ्रमण: 15.888.782
SalmonInClick op लिबियाले स्पष्ट पार्छ कि युरोपमा कुन देशहरू टर्कीले लिनेछ
सनशाइन op लिबियाले स्पष्ट पार्छ कि युरोपमा कुन देशहरू टर्कीले लिनेछ